Finland oo go'aansatay inay ku biirto NATO
Finland ayaa Axadda maanta ah xaqiijisay in ay dooneyso in ay xubin ka nqoto gaashaanbuurta ANTO, tani oo dib u habeyn ku sameyneysa dheelitirka awoodda ee Yurub kadib tobanaan sano oo aysan ku jirin isbahaysiyo militaryi.
Madaxweyne Sauli Niinisto ayaa isaga oo Helsinki ku sugan ugu yeeray tallaabadan mid taariikhi ah. “waa cusub ayaa baryay,” ayuu yiri kahor inta uusan u gudbin mooshinkaasi in uu baarlamaanku ansixiyo.
Tallaabada Finland, oo la filayo inay soo raacdo Sweden oo ay deris yihiin, ayaa ka careysiisay Kremlin-ka oo sheegay in aysan jirin sabab ay dalalka gobolka Nordic u cabsadaan, wuxuuna ballan qaaday jawaab.
Russia ayaa sahayda korontada ka jaratay Finland, oo ay wadaagaan xuduud dhan 1,300 kilometer taasi oo keentay in maamulayaasha dalkaasi ay weydiistaan Sweden taageero.
Dhawaaqa Finland ayaa yimid xilli ay sirdoonka reer galbeedku sheegeen in militariga Ruushka ay khasaare xooggan ka soo gaartay dagaalka Ukraine.